मिडियाको दबाबले मन्त्री बनें : डोबाटे विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता) Canada Nepal
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनको दर बढ्यो
हिमानी शाह निहुरिएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुरा सुन्दै गरेको तस्विर भाईरल बन्दै
परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले भने - 'सरकारका बारे अनर्गल प्रचार भयो'
अहिलेको चुनावमा इमान्दार, गरिब नेताहरू उठ्न सक्ने अवस्था छैन - उपेन्द्र यादव
पोखरा - गण्डकीमा ६० सांसद छन् । संविधानले २० प्रतिशत अर्थात् बढीमा १२ जनालाई मन्त्री बनाउने छुट दिएको छ । डोबाटे विश्वकर्मालाई सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गण्डकीले आफ्नो कोटा पुर्‍याएको छ । यहाँ कोटा मात्रै पुगेन, मन्त्री मण्डलमा रेकर्ड कायम भयो ।
अघिल्लो सरकार हुँदा ७ जना मात्रै मन्त्रि थिए । एमाले नेतृत्वकै सरकारले मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍यायो । ७ बाट ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो । अन्तिम समयमा फुटाईएको मन्त्रालयमा मन्त्रि पनि नियुक्त गर्न नपाउँदै सरकार ढल्यो र गठबन्धनको सरकार बन्यो ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग पनि सल्लाह नै नगरी उनले मन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । मन्त्री नियुक्त भएपछि न्युज कारखानाले डोबाटेसँग कुरा गरेको छ । प्रश्तुत छ उनीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
पार्टीमा छलफल भयो होला । मिडियाले धेरै चासो र चिन्ता ग¥यो । मिडियाको दवावले पार्टीलाई महशुस भयो होला । पार्टीले गल्ती गरेको महशुस गरेर मन्त्री बनायो भन्ने ठानेको छु । यो संविधानको कार्यान्वयन हो । समानुपातिक सिद्धान्तलाई पालना ग¥यो, गण्डकी सरकारले भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो, खुशीको अनुभुति गरेको छु । पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो । गौण रुपमा लिनुपर्छ ।
त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । तर सल्लाह होला । मैले यो देउ भनेर भएन । सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रदेश सरकारले छिटै जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।(न्युज कारखाना)
आश्विन २६, २०७८ मंगलवार १३:३३:१२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार जसपा धनुषाले जनकपुरमा आयोजना गरेको दशैँ, दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले सो कुरा बताएका हुन् ।
अहिलेको चुनावमा इमान्दार, गरिब नेताहरू उठ्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय राजनीतिमा अपराधिकरण बढ्दै गएको पनि उनले बताए ।
उनले भने - 'चुनाव महंगो हुँदै गएको छ । अब गरिब, विपन्न तथा पछाडि परेकाहरूको लागि चुनाव रहेन', उनले थपे 'भ्रष्ट्राचार गरे पसै कमाएको छ अब उनीहरूकै लागि चुनाव हुनेछ । सर्वसाधारणले त चुनावको बोझ नै उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।'
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १९:४४:२६ बजे : प्रकाशित
उदयपुर - परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अहिलेकोे गठबन्धन सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको जनताको जीवन रक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु रहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन उदयपुरद्वारा सोमबार गाईघाटमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।
'सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर जनताको जीवन सुरक्षा गर्ने काम हो । सरकारको दोस्रो प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारीले थिलथिलो बनेको मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न संकटमा परेका उद्योग, कलकारखानालाई सुदृढीकरण गर्ने रहको छ', उनले भने, 'त्यसैगरी तेस्रो संचालनमा रहेका ठूला योजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने नीति रहेको छ । चौथो भनेको भष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हो ।'
सरकारले अहिले चारवटा कुरालाई प्राथमिकीकरण गरी काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री डा. खड्काले जानकारी दिए । त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता रहेको कोरोनाविरुद्धको खोप चालू आर्थिक वर्षभित्रै ७० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे ।
उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर- १ का सांसदसमेत रहेका मन्त्री डा. खड्काले उदयपुरको विकासका लागि आफूले यसअघि पनि धेरै कामहरू गरेको स्पष्ट पारे । उदयपुरको अभिसापको रूपमा रहेको त्रियुगा नदी नियन्त्रणमा आफनो योगदान रहेको औँल्याए । ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको त्रियुगा नदी नियन्त्रणका लागि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै समन्वय गरी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये यस वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी टेण्डर खोल्ने तयारी भएको जानकारी गराए ।
निर्माणाधीन सगरमाथा विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को काम तीन वर्ष लगाएर सम्पन गराएको र अब चाँडै त्यहाँको जग्गा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा नामसारी गरी काम अघि बढाउने तयारी भएको उल्लेख गरे ।
पत्रकारहरूका यो सरकारको आयु कहिलेसम्म हो भन्नेलगायतका धेरै जिज्ञासामा संक्षिप्त रूपमा एकमुष्ठ जबाफ दिँदै मन्त्री डा. खड्काले विगतमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले दुई-दुई पटक संसद विघटन गरी मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास गरेकामा आफूहरूले यो संसद पूरै अवधि चल्नुपर्छ भनी अदालत र राष्ट्रपति समक्ष उपस्थित भई सनाखत गरेको स्मरण गर्दै अहिलेको गठबन्धन सरकार संसदको पूरा अवधि टिक्ने दाबी गरे ।
गठबन्धनमा रहेका राजनितिक दलहरूका बीचमा साझा सहमतिका एजेण्डाहरूका आधारमा सरकार संचालन भइरहेको बताउँदै नेपालको संविधानले मध्यावधि वा अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना नगरेको हुँदा संसदको पूरा अवधिसम्म अहिलेकै सरकार रहनेमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेसका केन्दीय सदस्यसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले मुलुकमा संकट आएपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको काँधमा जाने गरेको इतिहास साक्षी रहेको दोहोर्‍याए । झण्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले जनताले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेपछि मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि यो अहिलेको सरकार गठन आएको उनले बताए ।
केही संचार माध्यमले आफूले भनेको भन्दा फरक ढंगले समाचारहरू प्रसारण गरी अनर्गल प्रचार गरेकामा दु:ख व्यक्त गर्दै लिपुलेक, कालापानी वा नेपालका सबै भूभागमा राष्ट्रिय जनगणनालगायतका कार्यक्रमहरू नेपालको नियम, कानुनअनुसार संचालन हुने उल्लेख गरे ।
नेपालको हितविपरीत र दलीय सहमतिबिना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) पारित नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपालमा कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने र नेपालले सबै छिमेकी राष्ट्रहरूलाई समान दृष्टिकोणले हेरेको उनको भनाइ थियो ।
फरक प्रसंगमा निर्वाचन संविधानले तोकेको समयमा हुने तर राजनीतिमा संभावनाका खेल धेरै हुने हुँदा परिस्थितिजन्य वातावरण बनेमा केही समय हेरफेर हुन सक्ने मन्त्री डा. खड्काले बताए । न्युज कारखाना
कार्तिक ८, २०७८ सोमवार १९:५२:५६ बजे : प्रकाशित